गोरोपनाको चाहना: पुरुषहरुको नयाँ गहिरो चाहना
पुरुषको लागि आफै शृंगार गर्ने तरिकाहरु
पुरुष र ओस्टियोपोरोसिस
बुबा बन्ने तयारी गर्दै
३० को दशकमा हुँदा कसरी २०को दशकमा फर्कने
व्यस्त कार्यकारीहरुको लागि घामको किरण
के तपाईं यो बियर भुँडीको गर्वगर्ने मालिक हुनुहुन्छ ?
Q सर, म ३० वर्षको व्यक्ति हुँ । मैले एच.आई.भी.को सबै चेकअप गरेको छु, सबै रिपोर्टहरू ठीक छन् । म मेरो ओठ र मेरो लिङ्गको परामर्श लिन चाहन्छु । मेरो ओठको भित्री भागमा र लिङ्ग टुप्पोमा सेतो साना थोप्लाहरु थिए । लिङ्गमा सेता थोप्लाहरु बिगतका ३ वर्षदेखि रहेको छ र मेरो ओठमा भने एक महिनादेखि रहेको छ । मलाई यो कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । तर पक्का पनि यो मेरी पत्नीसँग शारीरिक सम्पर्क, केही मुख मैथुन गरेपछि भएको हो । मेरो शरीरमा केही सेतो थोप्ला देखा परेको अघिल्लो दिनमा केही शुद्ध रक्सी खाएको थिए । कृपया मेरो ओठ र लिङ्गमा किन यी सेता थोप्ला दुबीहरु आएका हुन भनेर बताइदिनुहोस् ।
तपाईंले दिनुभएको विवरण अनुसार तपाईंसँग भएका यो सानो सेतो थोप्लाहरु फोर्डाईस स्पट वा धब्बाहरु हुन् । यिनीहरु दृश्यात्मक बोसोबाट बनेको ग्रंथीहरू हुन् जुन प्रजनन अङ्ग र मुखमा हुन्छन् । तिनीहरू हानिरहित हुन्छन् र कुनै पनि रोग वा बिरामी वा यौन संक्रमणको कारणले भएका होइनन् । तिनीहरूलाई कुनै उपचारको आवश्यकता पर्दैन । तथापि परिक्षणपश्चात मात्र उपयुक्त निदान गर्न सकिन्छ ।
Q लिङ्गको टुप्पोको छाला वा फिमोसिससँग सम्बन्धित मद्दत चाहिन्छ ।
फिमोसिसको उपचार शल्यक्रिया गरेर वा शल्यक्रिया नगरेर गरि दुई प्रकारको हुन्छ । उपचारको छनौट समस्याको तीब्रता र गम्भीरतामा आधारित हुन्छ । तपाईंको लागि सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भनेर निर्णय गर्नको लागि यूरोलोजिष्टसँग परामर्श लिनुहोस् ।
Q नमस्ते, मेरो लिङ्गमा सेतो च्यापच्याप लाग्ने पदार्थ बनिरहेको छ । मेरो उमेर २६ वर्ष भयो ।
तपाईं शायद लिङ्गको टुप्पोको वरिपरि बन्ने सेतो पदार्थ वा स्मेग्माको उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ- जुन लिङ्गको टुप्पोको सामान्यतया: पिसाब निस्कने भागमा हुन्छ, जुन लिङ्गको बाहिरी छालाभित्र सेतो पदार्थको रुपमा जम्मा भएर रहेको हुन्छ । यसको समाधान धेरै सजिलो हुन्छ - हरेक दिन नुहाएको बेलामा वा अन्यथा, लिङ्गको बाहिरी छाला पछाडी लैजानुहोस् र बिस्तारै लिङ्गको फेदसम्म सफा गर्नुहोस् । यो केही दिनहरूमा आफैं गायब हुनुपर्छ ।
Q मलाई मेरो अण्डकोषको बाहिरी भाग खुम्चिएको जस्तो, कुनै दुखाईंको महसुस हुदैँन, तर यो दिन वा राति खुम्चिन रोकिएन । मैले धेरै डाक्टरहरूलाई देखाए र अपरेसन पनि गरें तर तपाईं केहि सुझाव दिनुहुन्छ ?
राम्रो तरिकाले शुक्राणु उत्पादन गर्नको लागी, अण्डकोषले बाँकी शरीरको तुलनामा कम तापक्रम राख्न पर्दछ । यसैले, चिसो मौसममा, सबैभन्द राम्रो तापक्रम कायम राख्नको लागी अण्डकोषहरु खुम्चिनु र शरीरको नजिक जानु सामान्य हुन्छ । तथापि गर्मी मौसमहरूमा, अण्डकोषहरू सामान्यतया चिसो पार्न झुण्डिन्छ । यो खुम्चिने र आराम हुदाँ क्रेमास्टरको मांसपेशि र डार्टोस फासियाको कारणले हुने गर्छ । पेटको आन्तरिक अन्तराष्ट्रिय चापमा परिवर्तन, पेटका मांसपेशिहरुको संकुचन र अधिकांश समयमा, क्रेमास्टर मांसपेशी दोब्रिने कुराहरुले अण्डकोषहरुको संकुचन हुन सक्छ । तपाईंको घर र कार्यालयमा न्यानो वातावरण राख्ने प्रयास गर्नुहोस् । छोटो कट्टुभन्दा कट्टु लगाउन दिनुहोस् । सोही अनुसार वास्तिक कारण र अवस्था पत्ता लगाउन शल्यचिकित्सकलाई देखाउनुहोस् ।
Q तपाईंलाई महिला यौन साथीलाई चुम्बनबाट रोगहरु सर्दछ ?
सर्छ । तपाईंलाई महिला साथीलाई चुम्बन गर्दा मुखबाट सर्न सक्दछ । रोग लाग्ने ढुसी बिरामीको मुखभित्र रहन्छ र चुम्बन गर्दा सजिलै अरुलाई फैलाउन सक्दछ ।
Q नमस्कार म २८ वर्षको नवविवाहित हुँ । मेरी यौन सम्बन्धमा कमजोर छ, यौनको समय अवधि पर्याप्त हुदैँन । म के गर्न सक्छु ?
तपाईंले सामना गर्नु भएको कुरालाई प्रदर्शनको चिन्ता भनिन्छ । यो भर्खरै विवाहित पुरुषहरुको बिचमा सामान्य कुरा हो । यसको पछाडिको कारण तपाईंको यौन साथीको अगाडि आत्तिएर वा हतारको काम गरेर हो । प्रायःजसो जोडीहरूको लागि शारीरिक सम्पर्कको अवधि ३-७ मिनेटको हुन्छ । त्यसैले यदि तपाईं यो कोटीमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन । तथापि तपाईंले आफ्नो समय सुधार गर्नका लागि यी सरल उपाय कसरी अपनाउन सक्नुहुन्छ । बिस्तारै गर्नुहोस् । पाडक्रिडालाई थप समय दिनुहोस् । हतार नगर्नुहोस् । धेरै पटक सेक्स गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । एक पटकको समय अवधिपछि यो सुधार हुनेछ । यदि गर्भावस्थाको लागि कुनै योजना छैन भने बाक्लो कण्डोमको प्रयोग गर्नुहोस् । यसले तपाईंको लिङ्गको अनुभूतिलाई ढिला बनाइदिन्छ र तपाईंलाई लामो समयसम्म टिक्न तपाईंको मद्दत गर्नेछ । तपाईं रोकेर-सुरु गर्ने विधिको पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको विर्य स्खलन हुनै लागेको बेलामा आफ्नो दिमागलाई यौन बाहेकको विचारमा लैजानुहोस् र एक पटक आनन्द भएपछि फेरि पुन: सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ ।
Q शुक्राणुले पानी छुँदा यो मर्छ ?
हो, मर्छ । शुक्राणु पानीमा परेको केही समयपछि मर्छ र यसले पानी छुने बित्तिकै भने होइन । यो शरीरमा र शरीर बाहिर तापक्रम, पी.एच. आदिमा शुक्राणुको वातावरणको कारणले भएको हो ।
Q म ३२ वर्षको आर्मी अफिसरको रुपमा काम गरिरहेको छ ..१ पटक दिमागमा आक्रमण भएको थियो र आधा वर्ष अगाडि... धेरै ठीक भएको छ.. म आफैंले श्वास फेर्दै खान सुरु गरें, म हिडें तर सहायता.. मैले लेखेको सबैकुरा सम्झें, म गणना गर्न सक्छु र मेरो भाषण अस्प्षट छ । मलाई सबै ठीक हुन्छ ।
बिरामी हुनु मुख्य शब्द हो । आफ्नो नियमित दिनचर्या र तालिकाबद्ध व्यायाम अपनाउनुहोस् । समयमा औषधि लिनुहोस् । तपाईंलाई पक्कै पनि यस कुराबाट ठीक हुनुहुनेछ । तपाईं आफ्नो अस्पष्ट भाषणको लागि भाषण थेरापीको मद्दत लिन सक्नुहुनेछ ।
Q मेरो उमेर २६ भएको छ । मेरो यौन समस्या छ । मेरो लिङ्ग उत्तेजित र कडा नभएकोले मेरो पहिलो सम्भोग गर्न सकिन ।
यदि तपाईंको लिङ्ग हस्तमैथुनको वा अन्य समयमा उत्तेजित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईंको पक्कै ठीक हुन्छ । त्यस समयमा, तपाईंलाई चिन्ताको कारणले उत्तेजित नहुन सक्छ । यद्यपि, यदि तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै लिङ्ग उत्तेजित भएन भने वा अचानक तिनीहरू रोकियो भने, तपाईं युरोलोजिष्ट भएको ठाउँमा जानुपर्छ ।